China FOTON U12 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Foton
Ny powertrain volamena FOTON U12 dia manasongadina ny fahombiazan'ny herinaratra tena tsara sy ny fanjifana ambany, mahafaly ny zavatra ilainao amin'ny serivisy tsindraindray sy serivisy mahazatra matetika amin'ny halavirana lavitra.
CONFIGURATION ny vokatra
Refy ankapobeny 1200 * 2550 * 3790
Curb Weight 14.5T
Fahaiza-mipetraka 32 + 1 + 1/47 + 1 + 1 (trano fidiovana) / 49 + 1
Firafitry ny vatana Semi-monocoque
Fenitra Emission EURO II - EURO V
Luagge Compartment 10 m3
Ny mpanazatra FOTON U12 Single Windshield dia manana endrika mirindra sy jiro nohavaozina, manangana tontolo milay sy mahafinaritra kokoa ho an'ny mpandeha.
TOERANA FIAROVANA MAHAFINARITRA
RESPUTER POWER SURGING
Golden powertrain Izy io dia mifangaro amin'ny motera Cummins ISG, ny fifindran'ny ZF, ny SachS clutch ary ny WABCO ABS ary ny ESC (tsy voatery), manasongadina ny fahombiazana avo lenta sy ny emission ambany.
Miorina endrika maivana sy maodely;
Teknolojia fiaramanidina avo lenta 2000bar;
Fanaovana ny asan'ny mpisava lalana dingana sy fitaovana vaovao.
Maivana, fonenana aluminium;
Famoahana tabataba ambany amin'ny alàlan'ny peratra helikaly nohavaozina;
Mpandrindra tsy misy fikojakojana mandritra ny androm-piainana feno fandefasana;
Misy famenoana menaka mandritra ny androm-piainana.
Manampy amin'ny fanitarana ny fiainana kodiarana hatramin'ny 10%;
Manatsara ny fanaraha-maso ny tranofiara mandritra ny hetsika maika;
Manampy amin'ny fisorohana ny fikororohana ny tranofiara mandritra ny freins;
Manatsara ny fahombiazan'ny freins amin'ny rehetra
Coefficient tsy miovaova amin'ny fikorontanana;
Fanoherana hafanana avo (mihalefy);
Haingam-bolo ambany & fitoniana haingam-pandeha;
Tsy misy fironana fanovana;
Mifanentana amin'ny tontolo iainana amin'ny famokarana ary
azo antoka kokoa
Ny kompartin'ny motera dia misy fanairana amin'ny hafanana ho an'ny fanaraha-maso ny fotoana tena izy sy ny fitaovana famonoana tena ho fanaraha-maso ny fotoana tena izy; Ireo fitaovana tsy mahazaka afo sy ireo fitaovana mahatohitra lelafo A miaraka amina fahombiazan'ny fiarovana tsara kokoa dia ampiasaina manodidina ny loharano fanafanana.
Ny teknikan'ny electrocoating manara-penitra dia manatsara be indrindra ny fampisehoana anti-harafesina sy ny hatsaran-tarehy maharitra.
Ny vy mahery mifangaro haringa dia ampiharina amin'ny herin'ny vokatra avo lenta izay nitombo 50% noho ny an'ny vy mahazatra. Miaraka amin'ny fanoherana tsara ny toetr'andro sy ny maripana ambany dia miantoka ny fiarovana ny fiara izany.
Ny firafitry ny vatana monocoque karazana truss sy ny famolavolana loop loop, miaraka amin'ny torsional tanjaka dia nihatsara 50%, manome ny mpamily sy ny mpandeha traikefa mitondra fiara sy milamina kokoa.
Foton dia manana ny laharam-pitsipika nomerika nasionaly momba ny nomerika, ny zana-pandrefesana haingam-pandeha, ny fandriam-panandramana, ny famaky ny axle, ny fandriam-panadinana ABS, ny rafitra fitiliana fitsapana ary ny hafa, ny fiantohana ny fanamarinana sy ny fankatoavana avy amin'ny TUV Rheinland Alemanina sy ny laboratoara nasionalin'ny CNAS
Ny vokatra Foton dia mandalo ny fitsapana mafy ny fiara sy ny fitsapana rollover mihoatra ny 100000 kilometatra amin'ny toetoetran'ny karazana lalana sy ny toetr'andro mafy indrindra toy ny mari-pana avo, ny mari-pana ambany ary ny tsindry ambany.
Foton dia miaraka amina dabilio andrana matihanina sy làlana fitsapana samihafa mba hiantohana ny fahamendrehana sy ny fahombiazan'ny fitaovana sy ny rafitra iarahan'ny bus Foton. Miaraka amina rafitra henjana sy mafy orina, ny bus Foton dia mahazaka fifandonana eo anilany sy eo an-dohany ary koa manakana ny fikororohana any aoriana. Alohan'ny hidirany amin'ny serivisy dia iharan'ny fitsapana sy fanamarinana henjana izy ireo.
EMIRATE VAHINYAfganistanaALBANIAARMENIAANGOLAARZANTINAAOTRISYAOSTRALIAAZERBAÏDJANBANGLADESYBahrainBELZIKABelizeBHOUTANBURKINA FASOBOLIGARIABahrainBorondiBÉNINBRUNEI DARUSSALAMBOLIVIABREZILABotsoanaBYELORUSSIAKANADANOSY CARIBBEANCAPE VERDEAFRIKA AfovoanyCONGOSOISASILIACAMEROUNCHINEKOLOMBIACOSTA RICAREPUBIKA CZECHKiobàSIPRAGAMBIAALEMAINADAMMANDANEMARKDjiboutiREPOBLIKA DOMINIKANINADSCHIDDAAlzeriaTIMORA AtsinananaEl SALADOREKOATERAÉRYTHRÉEESTONIAEJIPTAESPAINAETIOPIAFAILANDYFIDJIFrantsaFRANTSAY GUYANAGoianaGABONFANJAKANA MITAMBATRAGRANDE-BRETAGNEGÉORGIEGHANAGUINÉEGRESYGOATEMALÀCHINA-HONG KONGHONDURASHONGRIAIndoneziaIRLANDYISRAELYINDEIRAKIRANIRLANDYITALIAIVORY COASTJAMAIKAJORDANAJAPONKYRGYZSTANKAMPUCHEAFANJAKAN'NY KAMBODIAKOREA, DEM.PEOPLE NYREPOBLIKA an'i KOREACOTE O'IVOIREKENYAKoetyKazakhstanaKoetyLAOSLIBANONASAINT LUEIALIECHTENSTEINSRI LANKALIBERIALITOANIALUXEMBOURGLETONIALESPTHOLibyanaMaraokaMONACOMOLDOVA, REPOBLIKA an'nyMadagaskarMALIBIRMANIA (Madagascar)MONGOLIACHINE-MakaôMaldivesMALTAMAORISYMaoritaniaMALAWIMEKSIKAMALEZIAMOZAMBIKANAMIBIANIGERNigériaNIKARAGOÀHOLANDYNORVEZYNÉPALNOVELY ZELANDYOmanPANAMAPEROAPAPUA NEW GUINEAFilipinaPakistanaPOLONINAPORTOGALYPARAGOAYQatarRiyadhROMANIARWANDAFEDERASIONA ROSIANAARABIA SAODITASEYCHELLESSIERRA LEONENOSY SOLOMONSUDAN atsimoSOUDANSOEDASINGAPOURSLOVENIASLOVAKIASAN MARINOSÉNÉGALSOMALIASURINAMESYRIASoazilandyTchadMANDEHATAILANDYTADJIKISTANTurkmenistanTONIZIAVORONTSILOZACHINE-TAÏWANTANZANIAEmira Arabo MitambatraOkrainaOUGANDAETAZONIAOROGOAYOUZBÉKISTANVINCENT SAINTVENEZOELAVIET NAMYemenIogoslaviaAFRIKA ATSIMOZAMBIAZaïreZimbaboe